Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Soo-celinta Xayaysiiska | Martech Zone
Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Wax Ku Saabsan Xayeysiinta
Jimco, Juun 16, 2017 Khamiis, Juun 22, 2017 Gal Glikman
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee daabacayaasha iyo suuq kasta oo maanta jira ayaa ah kuwa xayeysiiska xayeysiiya. Ganacsatada, kor u qaadista xayeysiinta xayeysiinta waxay keeneysaa awood la'aanta in la gaaro dhagaystayaasha xiisaha badan ee xayiraadda. Intaas waxaa sii dheer, heerarka xayiraadda xayeysiinta ee sarreeya waxay keeneysaa tirakoob yar oo xayeysiis ah, oo ugu dambeyntii kordhin kara qiimaha CPM.
Tan iyo markii xayiraadaha xayeysiinta ah ay ciyaareen toban sano ka hor, sicirka xayeysiinta ayaa cirka isku shareeray, iyagoo helay malaayiin isticmaale ah kuna faafay madal kasta.
Mid ka mid ah natiijooyinkii ugu dambeeyay ee kooxdeena cilmi baarista ee Marka waa in heerka xayiraadda xayeysiinta ee Mareykanka uu hadda yahay 33.1%. Tani waxay ka dhigan tahay in 3kii isticmaaleba 10 ka mid ah aan loo soo bandhigin dadaalkaaga suuqgeynta. Si cad, waa arrin culeys ku ah adduunka suuqgeynta, iyo si isdaba joog ah adduunka daabacaadda, taas oo ku tiirsan xayeysiinta jiritaankeeda.
Sidee tan wax looga qaban karaa?
Ilaa hadda, waxaa jira habab dhowr ah oo isku dayaya in wax laga qabto ifafaalaha xayeysiinta. Daabacayaasha qaarkood waxay isku dayaan inay beddelaan qaabkooda ganacsi oo ay u isticmaalaan lacag-bixinta si ay uga qaadaan dadka isticmaala marinnada ay ku leeyihiin bartooda. Kuwa kale, waxay doorbidaan inay ku qasbaan adeegsadayaashooda inay caddeeyaan boggooda internetka adoo adeegsanaya goobaha xayeysiiska xayeysiinta si ay u helaan waxyaabaha ku jira bogga. Burburka ugu weyn ee labada istiraatiijiyadood waa jahawareerkooda iyo halista ay isticmaalayaashu leeyihiin ka tag goobta gebi ahaanba.
Tani waa halka habka kale uu ku yimaado - soo kabashada xayeysiiska.
Dib u soo kabashada xayeysiinta waxay u oggolaaneysaa daabacayaasha inay dib u soo geliyaan xayeysiisyo markii hore laga saaray xayiraadaha xayeysiinta Istaraatiijiyaddani waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah oo ka duwan inta ka hartay baakadka. Faa'iidada muuqata waxay awood u leedahay inay u adeegto xayeysiinta dhagaystayaasha xayeysiinta iyo kuwa aan xayeysiinta ahayn. Daabacayaasha ayaa xitaa awood u yeelan doona inay balaariyaan tiradooda xayeysiinta, isticmaaleyaasha qeybta waxayna bartilmaameedsadaan ololeyaal gaar ah si ay u xayiraan xayeysiinta iyo kuwa aan xayeysiinta aheyn.
Ka soo horjeedka waxa laga fili karo, adeegsadayaasha xayeysiinta xitaa waxay muujiyaan sicirka kaqeyb galka badan, mararka qaarna ka sareeyaan kuwa aan xayeysiinta aheyn.
Maxay yihiin noocyada kala duwan ee xalalka soo kabashada xayeysiinta?
Waxaa jira xalal dhowr ah suuqa maanta. Markaad baareyso kuwa kala duwan, xuduudaha muhiimka ah qaarkood waa in maanka lagu hayaa. Midka hore ayaa ah isdhexgalka - xalalka soo kabashada xayeysiinta waxaa lagu fulin karaa dhanka server-ka, CDN (Shabakada Bixinta Macluumaadka) ama dhinaca macaamilka. Labada server-dhinac iyo iskudhafka CDN labaduba waa kuwo isku dhafan oo aad u faragalin badan, waxayna badanaa ubaahan yihiin isbeddelo waaweyn qeybta daabacaha oo ay kujiraan howlahooda xayeysiinta.
Inta badan milkiileyaasha bogagga waxay ka baqayaan isku-darka noocan oo kale ah, kuwaas oo caqabad weyn ku ah, waxayna inta badan doorbidaan inaysan ku dhex milmin xalka gabi ahaanba. Dhanka kale, inta badan isdhexgalka macmiilka iyo dhinacyadu way xadidan yihiin waxaana ka hor tagi kara xayiraadaha xayeysiinta ah.
Farqiga kale ee muhiimka ah ee udhaxeeya xalalka soo kabashada xayeysiinta kaladuwan ayaa ah dhameystirkooda. Tan waxaa ka mid ah barnaamijyada ay ka shaqeeyaan, iyo xayeysiisyada ay ka soo kaban karaan.
Intaa waxaa dheer, inta daabacayaashu rabaan inay soo bandhigaan dhammaan noocyada xayeysiiska, oo ay ku jiraan xayeysiisyada joogtada ah, xayeysiiska fiidiyowga, iyo xayeysiisyada hooyo, qaar ka mid ah xalalka dib u soo kabashada ayaa soo celin kara oo keliya nooc ka mid ah xayeysiiska.
Waa maxay xalka Onit?
Onit waxay bixisaa barmaamijka soo kabashada ugu xayeysiiska badan, oo awood u leh soo celinta dhammaan meeleynta xayeysiiska ee laga xayuubiyay xayeysiisyada xayeysiiska, labadaba daalacashada mobilada iyo desktop-ka. Marka dib loo soo celiyo bandhig, fiidiyow iyo ololeyaal xayeysiis ah, oo lala socdo pixel buuxa, bartilmaameedka buskudka, iyo taageerada qeybta isticmaaleyaasha.
Xalkeenu wuxuu ku saleysan yahay isdhexgal deg deg ah, dhinac macmiil ah, oo u oggolaanaya isdhexgalka bilaa cillad la'aanta ah ee aan u baahnayn wax isbeddel ah oo ku saabsan macaamiisheenna xayeysiinta ama howlaha xayeysiinta.
Hadafka Onit waa inuu u suurtageliyo milkiilayaasha bogagga inay ilaashadaan qaabkooda ganacsi, iyagoo sidoo kale raadinaya khibradaha isticmaaleyaasha. Waxaan u shaqeynaa si waafaqsan Tilmaamaha Isbahaysiga ee Xayeysiinta Better, taas oo aan dareemeyno inaan u dhigeyno meel dhexe daabacayaasha iyo adeegsadayaasha labadaba.
Isticmaalka Onit, daabacaha ayaa xakamayn kara xayeysiisyada la bixinayo iyo halka la dhigayo, wuxuuna hubin karaa in kuwani ay yihiin oo kaliya kuwa tayo sare leh oo aan qas ahayn. Intaa waxaa dheer, xalkayaga waxay gacan ka geysataa waayo-aragnimo isticmaale wanaagsan, adoo dardargelinaya waqtiyada xamuulka bogga iyo yaraynta isticmaalka baaxadda.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Onit?
Natiijada ugu dambeysa ayaa ah in xayeysiisyada loo soo bandhigo isticmaalaha xayeysiinta, iyadoon loo eegin xayiraadaha xayeysiinta ah ee la isticmaalayo.
Kordhinta dakhliga xayeysiiska, kordhinta hawlgelinta
Marka heerka xayeysiinta xayeysiinta loogu talagalay Mako, Bogga madadaalada ee Israel hogaamiso, waxay gaadhay 33% waxayna si weyn u dhaawacday hawlgalkooda ku saleysan xayeysiiska, waxay bilaabeen inay raadiyaan xal. Sida Uri Rozen, Maamulaha shirkadda Mako uu sheegay, Marka ayaa ah xalka kaliya ee u oggolaaday iyaga inay sii wataan ganacsigooda xayeysiinta iyagoo aan wax hakad gelin. Adoo adeegsanaya xalka 'Onit', Mako wuxuu awood u yeeshay inuu ku bixiyo ololeyaal xayeysiis ah xayeysiinta isticmaalayaasha tan iyo Juun 2016, iyo dhowaan, wuxuu bilaabay inuu u adeego xayeysiisyada fiidiyowga ee qaybaha maqaallada iyo adeeggooda ballaaran ee VOD. Ku darsigiiititit ee Mako ee muuqaalka dakhliga xayeysiiska wuxuu keenay koror aad uxun 32% -39% intii udhaxaysay Janaayo iyo May ee 2017.
Sida laga soo xigtay Rozen, isticmaaleyaasha xayeysiinta waxay soo bandhigeen waxqabad la mid ah ama xitaa ka sarreeya iyo heerarka haynta marka loo eego kuwa aan adblocking ahayn, celceliska waqtiga kalfadhiga oo koraya 3.2%.
Mako waa hal tusaale oo kaliya oo ah lamaanayaasheena farxadda badan.
Waxbadan Ka Ogow Markaad Dhigto
Tags: dib u soo celinta xayeysiintasoo kabashada xayeysiiskaxalalka soo kabashada xayeysiintaxayeysiintaxayiraaddaisbahaysiga si loo helo tilmaamo xayeysiis fiicanIsraa'iilmakomar dambe
Gal Glikman waa agaasimaha guud iyo aasaasaha Marka, xalka soo kabashada xayeysiinta ee daabacayaasha qiimaha leh. Kahor aasaaskiisa Onit, Gal wuxuu ka soo shaqeeyay waaxda sirdoonka ee ciidamada Difaaca Israel isagoo ahaa sarkaal, horumariye & cilmibaare ammaan muddo 4.5 sano ah.